Hogaamiyaasha ugu fiican dhamaantood waxay leeyihiin ujeedo dabiici ah oo u ooman cilmiga. Kulligeen dabiiciyan ayaynu jecel nahay, laakiin maxay dadka qaar ugu muuqdaan inay jawaabaha oo dhan helaan oo ay sida ugu badan uga faa'iideystaan ​​noloshooda? Si fudud haddii loo dhigo, waa sababta oo ah waxay leeyihiin maskax xasaasi ah oo ay yaqaanaan sida loo waydiiyo su'aalaha saxda ah. Raadi sida loo adeegsado su'aalaha si loo hormariyo kooxdaada, doorkaaga hoggaamineed, iyo xirfaddaada. Tababarkan, Joshua Miller wuxuu kugula socodsiinayaa faa'iidooyinka xiisaha iyo sida looga faa'iideysto su'aalaha. Soo ogow doorka shabakadaha bulshada ee su'aalaha, xaaladaha aysan su'aalaha ka soo bixin jawaabo wax ku ool ah ...
Ku kobci fikirka hal abuurka leh iyo hal abuurka su'aalaha Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Kordhinta mushaharka shaqaalaha qaybta medico-social sector
Ka jawaab diidmada macaamiisha